Daawo: Xasan Deeq oo isku sharxay madaxweyne - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Xasan Deeq oo isku sharxay madaxweyne
Daawo: Xasan Deeq oo isku sharxay madaxweyne
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad uu musharxnimadiisa madaxweynaha Soomaaliya ku shaacinayey Xasan Cabdi Guuleed (Xasan Deeq) oo ah nin dhalinyaro ah.
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, aqoonyahano, odayaal dhaqan, siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qeyb galay munaasabadan, kuwaas oo intooda badan jeediyey hadallo ay ku bogaadinayaan musharax Xasan Deeq.
Waxay sheegeen inuu yahay nin karti u leh inuu qabto xilka madaxweynaha Soomaaliya, isla markaana hadii loo doorto xaaladan ka samata bixi kara dalka.
Musharax madaxweyne Xasan Deeq oo munaasabadii maanta qeybaheeda dembe hadal ka jeediyey ayaa balan qaaday in Soomaaliya uu ka samata bixi doono burburka adag ee ragaadiyey, hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha dalka.
Hoos ka Daawo balan qaadyada musharax Xasan Deeq